काठमाडौं, २९ वैशाख । नेकपाभित्र स्थायी समितिको बैठक बोलाउन माग गरिएको धेरै समय भइसक्यो । तर, बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली तयार देखिँदैनन् ।
दुई तिहाई बहुमत नजिकको नेकपा सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा लागिरहेको छ । तर यो तयारीमा नेकपाको कुनै संलग्नता छैन । सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे छलफल र बहस छैन ।
सचिवालय बैठक बसिरहेको बेला नसकिँदै छाडेर आफ्नो समूहका नेता भेट्न थालेका ओलीले बैठक बोलाउनेबारे कुनै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका छैनन् । कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एकलौटी ढंगले बैठक बोलाउन आँट गरिरहेका छैनन् ।
पार्टीभित्र खुच्मिएको लोकतन्त्रका कारण नेता र सांसदहरु यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र संसदमा आफ्नो असन्तुष्टि र कुण्ठा पोख्न थालेका छन् । सोमबार संसदमा यस्तै देखियो । संसदीय समितिहरुमा पनि नेकपाका नेताहरु नै सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्तमाथिको सोमबारको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वको रवैयाविरुद्ध आक्रोश पोखे ।
नेकपाका सांसद डा. बेदुराम भुसालले सत्तारुढ पार्टीले नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफलै नगरी ल्याउने तयारी गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनको प्रश्न थियो, ‘बजेट ल्याउने तयारीबारे पार्टीहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्थ्याे, अझ सत्तारुढ पार्टीमा त छलफलै नगर्ने तरिका घोर अलोकतान्त्रिक छ, त्यसैले यस्तो कुरालाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?’
नेकपाकै अर्का सांसद पर्शुमेघी गुरुङले थपे, ‘पार्टीहरूभित्र छलफलै नगरी बजेटको तयारी गर्ने तरिका अलोकतान्त्रिक छ ।’ जवाफमा ओली समूहबाट अर्थमन्त्री भएका डा. युवराज खतिवडाले महामारीको यो अवस्थामा पार्टीहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने कुरा व्यावहारिक हिसाबले सम्भव नहुने बताए ।
बैठक राख्न तयार नभएपछि सांसदहरुलाई पार्टीको पक्षमा मत राख्न ह्विपजस्तै गरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदभित्र एकताबद्ध भएर समान धाराणासहित प्रस्तुत हुन सबै सांसदहरूलाई पत्रमार्फत लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
तर, जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र त्यसअघि स्थायी समिति बस्ने निश्चित नभएको अवस्थामा नेता तथा सांसदहरु रुष्ट देखिएका छन् ।
रातारात पार्टी फुटाउन मिल्ने र संवैधानिक निकायमा सत्तारुढहरुकै बोलवाला चलाउने अध्यादेश ल्याएर विवादमा फसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक अस्त्रहरु रित्तिँदै गएका छन् ।
पार्टी एकताको चर्चा चलिरहँदा निर्वाचनताका ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर पूर्वपार्टीका नेतालाई किनारा लगाए । ओलीले आफ्नो समूहका भुईंतहका नेताहरुलाई पनि रातारात राष्ट्रिय नेता बनाए । राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि प्रदेश सरकार गठनका कामसम्ममा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गरे ।
जब पार्टी एकता भयो, अनि पूर्वमाओवादीले पेले भन्दै पूर्वएमाले खोज्न थाले । पूर्वएमालेका धेरै नेताहरुलाई पटकपटक झूटो आश्वासन दिएर बिरालाले मुसो खेलाएजस्तो खेलाएकोले उनीप्रतिको विश्वास गुमेको एक नेताले बताए । ‘हामीलाई थाहा छ, वामदेवजीलाई जसरी पटकपटक आश्वासन दिएर धोका दिए, अब झलनाथजी वा अन्य नेताहरुलाई पनि त्यही पुरानै तरिका अपनाउन खोज्नुभएको भन्ने सुनेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘अब कोही झुक्किनेवाला छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उनले १४ वर्ष जेल बस्दा ओलीले मार्क्सवाद नपढेर महाभारत पढेकोले आज यस्तो दिन आएको तर्क गरे । नेकपा यो बेथितिमा फस्नुका अगाडि ओली नै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ ।
झुटा आश्वासनले नभएपछि पार्टी सहकर्मीलाई अख्तियारदेखि अदालतसम्म देखाएर तर्साउन मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख भेटिरहेको उनले तर्क गरे ।
अन्तिमपटक, शनिबार राति ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई बालुवाटार बोलाएर दुई घण्टा छलफल गरे । प्रधानमन्त्री झलनाथलाई पनि वामदेवशैलीमा फकाउन खोजे पनि झलनाथले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएपछि ओली नयाँ अस्त्रको खोजीमा छन् ।
उता, नेपाल-दाहाल समूहका नेताहरु भने कम्तिमा छोटो समयको लागि मात्रै बैठक बोलाए पनि हुने भन्नेछ । २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र जेठ १५ मा बजेट ल्याउने । यसबीचमा सदनमा पनि व्यस्त हुनुपर्ने अवस्थाले बैठक बोलाउने अवस्था नभएको ओली समूहको तर्क छ । तर, समय भएको बेला किन नबोलाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनीहरुसँग छैन ।
दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरु भने संसदबाट ओलीलाई सबक सिकाउनुपर्ने पक्षमा आफ्ना नेताहरुलाई दबाव दिइरहेका छन् । प्रचण्डलाई स्थायी समिति बोलाउन दबाव दिए पनि उनले यो मानिरहेका छैनन् । अब असन्तोष व्यक्त गर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न असहयोग गर्ने कि ? भन्ने सम्मको छलफल नेकपाभित्र सुरु भएको छ ।
संकट चुलिँदै जाँदा नेकपा अध्यक्षद्वयबीच दिनदिनै छलफल भइरहे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छ । आइतबार पनि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । संसदका दुई महत्वपूर्ण कार्यभारमा प्रवेश गर्नुअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने,उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल हुनुपर्ने,अनिमात्रै सदनमा पेश हुनुपर्ने आफ्नो समूहको माग जति दोहोर्‍याए पनि प्रचण्डलाई ओलीले सकरात्मक जवाफ दिएका छैनन् ।
चुनावी घोषणापत्र र पार्टी एकताको म्याण्डेटअनुसार सबैको सुझाव समेटेर अघि बढ्ने बाहेकको विकल्पमा आफू पनि टसमस नहुने प्रचण्डले संकेत गरेका छन् । तर, ओलीले भने ‘बैठकको झमेलामा नफसौं’ भन्दै आएको दाहालले आफू निकटका नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन् ।
संसदमा नीत तथा कार्यक्रम घोषणा भएको भोलिपल्ट जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवस नेकपाको लागि महत्वपूर्ण छ । त्यो दिन पार्टी एकताको तेस्रो वर्ष लाग्ने दिन पनि हो । तर, त्यही दिन आसपास नराम्रो कुरा सुन्नुपर्ने हो कि भन्दै नेकपाभित्र आशंकाको बादल पनि मडारिइरहेको छ ।